NR-BY608XSSG Refrigerator - Panasonic
အဆင်ပြေစေရန် ရေခဲအကန့်ကို အောက်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိပေးထားသော သေသပ်ပါးလွှာသည့် ရေခဲသေတ္တာ
သေသပ်ပါးလွှာပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်း
ရိုးရှင်းပြီး သေသပ်ပါးလွှာသည့် တံခါးတွင် လှပတင့်တယ်သည့် ဒီဇိုင်းပုံစံ ရရှိစေရန် ဖရိန်များ၊ အဖုများ သို့မဟုတ် ချိုင့်ခွက်များ မပါရှိပါ။ စတိုင်ကျပြီး လျှပ်ငြိမ်စနစ်သုံး touch control panel ဒီဇိုင်းကြောင့် လှပမှုကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေသည်။
တစ်ခါမှ မခံစားဘူးသော လန်းဆန်းမှုကို တွေ့ကြုံခံစားလိုက်ပါ!
Prime Fresh အအေးပေးစနစ်က အစားအစာများကို ခန့်မှန်း -3°C အထိ အေးစေသည့်အတွက် အစားအစာများ၏ မျက်နှာပြင်ကိုသာ အေးစေပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်အေးထားသော အစားအစာများသည် မည်သည့်အခါမျှ ကျစ်လျစ်မာကြောသွားမည်မဟုတ်ဘဲ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းများသည်ပင် အကောင်းဆုံး အနေအထား၌ ရှိနေနိုင်သည်။
-3˚C Prime Fresh အအေးပေးစနစ်က အဆင်ပြေဆုံးပါ!
1. အရည်ပျော်အောင် မလုပ်ဘဲ ချက်ပြုတ်ခြင်း
2. အမြဲသင်းပျံ့နေမည့် ရနံ့
အရည်ပျော်အောင်လုပ်ရန် မလိုတော့သဖြင့် ရေစက်များ မကျတော့ပေ။ ထိုအတွက်ကြောင့် အာဟာရဓာတ်များနှင့် အရသာများ မဆုံးရှုံးနိုင်တော့ပါ။
အနံ့အသက်များအား ရေခဲသေတ္တာအကန့်ထဲရှိ အခြားအစားအစာများထဲသို့ ပြန့်နှံ့မသွားစေရန် ကူညီပေးသည်။
အောက်ခြေတွင် ရေခဲခန်းပါသော ရေခဲသေတ္တာ စတိုင်အသစ်
သုံးရလွယ်ကူသော အံဆွဲ-ပုံစံ ရေခဲခံအကန့်
အံဆွဲ-ပုံစံ အောက်ခြေ ရေခဲခံအကန့်ပါရှိသည့်အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ အဆင်ပြေပြေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့် အရာကို ရှာဖွေရန် ပစ္စည်းများကို ငုံ့ကြည့်ရခြင်းကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ သပ်ရပ်ပြီး ပိုင်းခြားထားသော သိမ်းဆည်းသည့်နေရာများပါရှိပြီး ပို၍ ပိုးမွှားကင်းစင်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန် အနံ့အသက်များ မပျံ့နှံ့အောင် သီးခြား အကန့်များက ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
* Japan Spinners Inspecting Foundation Laboratories မှ အသိအမှတ်ပြု ထားပါသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်း နံပါတ်- No. 003557-1, 003557-2
နောက်ဘက်ပန်နယ်မှ ထွက်ရှိသော လေအေးကို အပေါ်နှင့် ဘေးဘက်သို့ မှုတ်ပေးပြီး သိမ်းထားသည့် အစားအစာများကို နူးညံ့စွာ အအေးပေးရန် လွှမ်းခြုံပေးပါသည်။
* အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် အအေးခံအကန့်အတွက် "MED" ဖြစ်မှသာ ECONAVI က အလုပ်လုပ်သည်။ *1 Panasonic ကုမ္ပဏီတွင်းသုံး ဒေတာ။ ဝန်းကျင် အပူချိန်- 32°C၊ ရေခဲသေတ္တာ၏ အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်သည် “MED” ဖြစ်သည့်အခါ။ တံခါး အဖွင့်/အပိတ်လုပ်သည့် ကြိမ်နှုန်း- ရေခဲသေတ္တာအကန့် 35 ကြိမ်၊ ရေခဲခံအကန့်7ကြိမ်။ ဝန်- ရေခဲခံအကန့်ထဲတွင် 625 g ရှိ စမ်းသပ်အထုပ်များ၊ ရေခဲသေတ္တာအကန့်ထဲတွင် 2.5L ရှိ ရေ။ မီးပြတ်သွားပါက ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်များက ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။